Major Mayhem2- Gun Shooting Action 1.160.2019042210 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.160.2019042210 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Major Mayhem2- Gun Shooting Action
Major Mayhem2- Gun Shooting Action ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သေနတ်များ, လက်ပစ်ဗုံး, အခမဲ့နှင့်ပျော်စရာပစ်ခတ်မှုအရေးယူ! အခမဲ့, ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးမိုဘိုင်းအရေးယူ Arcade ဖုံးပစ်ခတ်မှုဂိမ်း Download ယခုအခါမျှအင်တာနက်နှင့်အတူလုံးဝအော့ဖ်လိုင်း play!
ဗိုလ်မှူး Mayhem 2, အမြင်အာရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်များနှင့်ဆော့ကစားရန်လွယ်ကူထုပ်ပိုးမြန်ဆန်ပျော်စရာ, အရေးယူဖြစ်ပါတယ်။ ရည်ရွယ်ထားနှင့်ရန်သူများကိုနဲ့ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ပြည့်ဝ၏မစ်ရှင်နှင့်အတူတစ်ဦးသေနတ်ပစ်ဂိမ်း-ထုပ်ပိုးယိုအတွက်ကြီးမားတဲ့သေနတ်ပစ်။ ဒါဟာကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းတို့၏အကောင်းဆုံး! မကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့သည်တပ်ဖွဲ့များအနေဖြင့်အခမဲ့ကမ္ဘာကြီးနှင့်သင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝ Save!
- နယူး - အွန်လိုင်းဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ဆုနှင့်အတူနေ့စဉ် Survival စိန်ခေါ်မှု Mode ကို။
- နယူး - အော့ဖ်လိုင်း mode ကို။ ဘယ်နေရာမှာမဆို Play, အချိန်မရွေး။
- shoot မှရန်သူရာပေါင်းများစွာ!
- အကြီးအကာတွန်းနှင့်အတူရောင်စုံ, ပျော်စရာ, HD ကိုဂရပ်ဖစ်။
- လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် mayhem elevates ကြောင်းဂရိတ်ဂီတ။
- non-stop action ကို 50 လက်လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆင့်ဆင့်မှတဆင့်စွန့်စားမှု!
-5နဲ့ Big သူဌေးကတိုက်ပွဲများ!
- ဖြည့်စွက်ဖို့ 150 mini ကိုမစ်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်များ!
- ဟာသတစ်ခု dash နှင့်အတူအလင်းနှလုံး storyline ။
- 20 သေနတ် Unlock နှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်!
● Sniper ရိုင်ဖယ်
-7ထူးခြားတဲ့သေနတ်အမျိုးအစားများကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းစတိုင်နှင့်အတူအသီးအသီး။
- ထို 150 မစ်ရှင်ဆုတံဆိပ်ဝင်ငွေအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်စုံစမ်း။
ပျော်စရာ, Arcade အရေးယူဂိမ်းကိုပိုပြီးပြန်လာမယ့်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်။ , သေနတ်ပစ်လ, ကျည်ဆံ, ကယ်ဆယ်ရေးဓားစာခံ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိခရီးသွားရှောင်နှင့်ကမ္ဘာကယ်တင်! သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သေနတ်အမျိုးမျိုးနှင့်ဗိုလ်မှူး Mayhem တိုက်ဖျက်မည်!
●နယူး: မစ်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်များဒီမှာပါ! သငျသညျအခမဲ့ဆုလာဘ်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေအဘို့ 150 mini ကိုမစ်ရှင်ရည်ရွယ်ချက်များ။
● Survival Mode ကို! နေ့စဉ် Survival Mode ကိုစိန်ခေါ်မှု Play နဲ့ကြောက်မက်ဘွယ်ဆုအနိုင်ရနေ့စဉ် Survival Mode ကိုအမှတ်သင်ပုန်းပေါ်မှာယှဉ်ပြိုင်!
●အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် Mode ကို: လုံးဝအော့ဖ်လိုင်း Play! ဘယ်နေရာမှာမဆို, မြေအောက်ရထားပေါ်တွင်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်တဦးတည်းလေယာဉ် Play! ဆုလာဘ်ဖြစ်ပွားမှုကိုဖွင့်ပြီးအင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲစွမ်းအင်ဝင်ငွေ။
●ကိုအကောင်းဆုံးမိုဘိုင်းဖုံး Arcade အရေးယူသေနတ်သမားအတွက်ထိန်းချုပ်ပါ! အဆိုပါအခမဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုသင့်ရဲ့အကူအညီကိုလိုအပ်ပါတယ်! အဆုံးစွန်အရေးယူသူရဲကောင်းဖြစ်! မည်သူမဆိုထိန်းချုပ်မှုရည်ရွယ်ထားနှင့်ပစ်သတ်ရန်၎င်း၏ရိုးရှင်းသောကိုထိပုတ်ပါနှင့်အတူဒီဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လူတိုင်းမကကျွမ်းကျင်နှင့်အခမဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်, သင်ကသူရဲကောင်းများမှာနိုင်မလဲ? သက်သေပြပါ! ယခုအခမဲ့ဗိုလ်မှူး Mayhem2download လုပ်ပါ။
●ဗိုလ်မှူး Mayhem 2, အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်သောစနိုက်ပါမျက်နှာစာများနှင့်အတူစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်အတွက်နယူး။ ဤအအထက်တန်းလွှာနှင့်အစွမ်းထက်အသစ်ကသေနတ်များနှင့်အတူအဝေးကသူများပစ်မှတ်ကိုနှိပ်ပါ။
●သူတို့အားမကောင်းသောအလူကြမ်းအဖြစ်ချေမှုန်းခြင်းအားဖြင့်မော်ကွန်းအရေးယူစွန့်စားမှုဖြည့်! ထိုကဲ့သို့သောပစ္စတို, ရိုင်ဖယ်သေနတ်များ, လက်ဖြောင့်ရိုင်ဖယ်, လက်ပစ်ဗုံး, bazookas နှင့်တင့်ကား, တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်, ရေငုပ်သင်္ဘောများနှင့်သင်မေ့လျော့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ5အကြီးအကျယ်သူဌေးတိုက်ပွဲ၏စိန်ခေါ်မှုအပေါ်အကြံပေးအဖွဲ့အဖြစ်သေနတ်များနှင့်အတူလက်နက်ပါဆိုးယုတ်သောလူကြမ်းအဖြစ်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ကြေးစားအပေါ်ကိုယူသွားပါ!
●အပေါငျးတို့သမစ်ရှင်ကြယ်များစုဆောင်းပါ။ ကွင်းဆက်အတူတကွကြယ်နဲ့ဆုများရရှိရန်အံ့သြဖွယ်ပျက်စီးမှုကို combo ။ သင်သည်ထိုသူတို့အားလုံးဝင်ငွေဖို့လုံလောက်တဲ့ကောင်းသောရှိပါသလား အဲဒီမှာစုဆောင်းဖို့ 150 မစ်ရှင်ကြယ်များဖြစ်ကြပြီး 50 action ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ထူးခြားသောမစ်ရှင်ထုပ်ပိုး။
●ကမ္ဘာတဝှမ်းနှင့်5လုံးဝထူးခြားသောအခန်းကြီးထဲမှာလမှခရီးသွား။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခနျးမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့လှပတဲ့ HD ကိုဂရပ်ဖစ်များနှင့်ကာတွန်းနှင့်ပြည့်ဝ၏တစ်မူထူးခြားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
●တောတွင်း၌စစ်၏အသံသို့မဟုတ်အာကာသအတွင်းစစ်တိုက်ရာသီချင်းတွေကိုနားထောင်ပါ! တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်ကိုသင်နှစ်သက်ပါမည်တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသံက scape နှင့်ဂီတလမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။ ထ pumped သူတွေကိုသေနတ် load နှင့်ကျည်ဆံဟာစည်းချက်မှပျံသန်းကြကုန်အံ့ Get!
ဗိုလ်မှူး Mayhem2နေဆဲတက်ကြွစွာဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ကပိုမစ်ရှင်, စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဂိမ်း Modes သာ, သေနတ်, ပါဝါ ups, ဝတ်စုံ, ဇာတ်ကောင်နှင့်သင်ခံစားရန်အတွက်အခြား၎င်း၏ Goodies ဖြည့်စွက်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကို Give နှင့်အတူတူကျနော်တို့ဗိုလ်မှူး Mayhem2ထွက်အဲဒီမှာအကြီးမြတ်ဆုံးမိုဘိုင်းသေနတ် shooters ၏တဦးတည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်!
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ဗိုလ်မှူး Mayhem2Download!
Major Mayhem2- Gun Shooting Action အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Major Mayhem2- Gun Shooting Action အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Major Mayhem2- Gun Shooting Action အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Major Mayhem2- Gun Shooting Action အား အခ်က္ျပပါ
ezam-akmar စတိုး 22.55k 7.6M
Major Mayhem2- Gun Shooting Action ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Major Mayhem2- Gun Shooting Action အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.160.2019042210
ထုတ်လုပ်သူ Rocket Jump
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://rocketjumpgames.com/appservices/PrivacyPolicy.html
Release date: 2019-07-28 10:37:00
လက်မှတ် SHA1: BF:7D:7B:95:9C:93:85:4A:E1:3E:FB:97:D6:1D:6D:1A:9C:9D:D7:D8
Major Mayhem2- Gun Shooting Action APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ